မွှေးပျံ သင်းကြိုင် ရနံ့စုံ လှိုင်တဲ့နေ့ | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ဇန်နဝါရီ ၂၅ ၊ ၂၀၁၃
M-Media၂၀. ၁. ၂၀၁၃ တနင်္ဂနွေနေ့ နေ့လည် (၃) နာရီခန့်တွင် strand hotel ခန်းမကြီးအတွင်းမှာ ရနံ့စုံသင်းပျံတဲ့ ပန်းဥယျာဉ်ကြီးတစ်ခု ကောင်းကင်က ခုန်ဆင်းလာသလား မှတ်ရအောင် မွှေးပျံသင်းကြိုင် ရနံ့စုံလှိုင် ခဲ့ပါတယ်…။
အကြောင်းကတော့ ကျဆုံးလေပြီးသော အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများအား ဂုဏ်ပြုပွဲနှင့် ဆရာကြီး ဦးရာဇတ်၏ (၁၁၅) နှစ်မြောက် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားပွဲကြီးကို လူမျိုးစုံ၊ ဘာသာစုံတို့မှ ရဟန်းသံဃာ ၊ လူငယ်၊ လူကြီး အလွှာစုံမှ စုဝေးရောက်ရှိကာ နိုင်ငံကျော် အနုပညာရှင်များမှမြန်မာ့ ဇာတိသွေး ဇာတိမာန် တက်ကြွ စေမည့် အမျိုးသားရေး တေးသီချင်းများ သီဆိုခြင်းမှာ တက်ရောက်လာကြသူ ပရိသတ် အားလုံး ကြက်သီးမွှေးညှင်းများ ထလောက်အောင် မျိုးချစ်စိတ်များ တဖွားဖွား ပေါ်ပေါက်ခဲ့ရသောကြောင့်ပင် ဖြစ်လေသည်။
တေးသီချင်းများကို နားသောတဆင်ရင်း နိုင်ငံတော်၏ ဆောင်ပုဒ်တစ်ခုဖြစ်သော “မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ် ရှင်သန်ထက်မြက်ရေး” ဟူသောဆောင်ပုဒ်ကို အကောင်အထည် ဖော်နေသည့်အလား နှလုံးသားထဲ စွဲမှတ် ခံစားမိလျက်သား ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။
အခမ်းအနားမှာကြွရောက်လာကြတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်းသံဃာတော်များ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ၊ ခရစ်ယာန် ဘုန်းတော်ကြီးများနှင့် ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်များ၊ ဟိန္ဒူဆရာတော်များ၊ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်များ၊ အစ္စလာမ် ဓမ္မကထိကများနှင့် အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များ တဖွဲဖွဲ ကြွရောက်လာကြသည့်မြင်ကွင်းမှာ အားရကျေနပ်ဘွယ် ပီတိဖြစ်ဘွယ်ရာပင် ဖြစ်တော့သည်။
အခမ်းအနားတွင် တက်ရောက် ဟောပြောကြသော သီတဂူဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်မှ ဆရာတော် အရှင်တိက္ခသာရ နှင့် ရှု့ထောင့်စုံမှ ပညာရှင် အသီးသီး၏ ဟောပြောချက်များတွင် တူညီသော အချက်မှာ ဆရာကြီး ဦးရာဇတ်အား ချီးမွမ်း ထောပနာ ပြုခြင်းပင် ဖြစ်ပေသည်။
ဤသည်ကိုပင် ကျွန်တော့်အသိစိတ်တွင် လက်ကနဲ အသိတစ်ချက် ၀င်လာပြီး စဉ်းစား တွေးတောစရာများ ပေါ်လာခဲ့ရပေသည်။အကြောင်းမှာ ဆရာကြီး ဦးရာဇတ်သည် အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် ဖြစ်ပါလျှက် နိုင်ငံအကျိုး၊ လူမျိုးအကျိုးအတွက် စွမ်းစွမ်းတမံဆောင်ရွက်ရင်း တိုင်းပြည်အတွက် အသက်ကိုပင် ပေးဆပ်ခဲ့သူတစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့ပြီး ဆရာကြီး၏ နောက်ပိုင်းတွင် အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များ အနက် ဗိုလ်မှုးကြီးဘရှင်၊ ဦးရာရှစ်၊ ဦးခင်မောင်လတ်၊ ဗိုလ်မှုးကြီးတင်စိုး၊ သံအမတ်ကြီး ဦးဖေခင်၊ ၀မ်းအိုဝမ်း ကျော်ဝင်းမောင်၊ ဆရာကြီး ဃာဇီမုဟမ္မဒ်ဟာရှင်(မ်)၊ ဆရာကြီးချယ် စသော နိုင်ငံအကျိုး၊ လူမျိုးအကျိုး၊ သာသနာ အကျိုးများကို စွမ်းစွမ်းတမံ ဆောင်ရွက်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါသော်လည်း ယခုနောက်ပိုင်း ကာလများတွင် ထိုထိုသော မျိုးချစ်အာဇာနည် ပုဂ္ဂိုလ်များ ပေါ်ပေါက်မှု မရှိတော့ဘဲ ယခင်က သမိုင်းဝင် ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားများပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် လွမ်းဆွေး တမ်းတ သတိတရဖြင့် ရင်သပ်ရှုမော အလွမ်းတောထဲ ယောင်လည်လည် ဖြစ်နေခဲ့ကြ ရပေသည်။ ။ ။ ။
ဒါသည်ပင် ကျွန်တော့် အတွက် များစွာ စဉ်းစား တွေးတောဘွယ်ရာ ဖြစ်ရပေတော့သည်။
တကယ်ဆိုပါလျင် ဦးရာဇတ်ကိုယ်ပွါးများ တစ်စ တစ်စ တိုးပွါးလာသင့်ပါလျှက် ဤသို့ မဖြစ်ပေါ်ခြင်းမှာ . . .
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များသည် တိုင်းချစ်ပြည်ချစ် မျိုးချစ်စိတ် မရှိတော့၍လား?
သို့တည်းမဟုတ်ပါက . . . ထိုသို့ မပေါ်ပေါက်အောင် စနစ်တကျ ဟန့်တားမှုများ ရှိနေသည်လား ဆိုသည်ကို အများစုမှ လေ့လာ သုံးသပ် အဖြေရှာရန် လိုအပ်ပေသည်။
တကယ်ဆိုလျှင် အစ္စလာမ် ဘာသာ၏ အဆုံးအမတွင် “မိမိနေထိုင်သော တိုင်းပြည်ကို ချစ်မြတ်နိုးခြင်းသည် အီမာန်တည်းဟူသော ဘာသာရေး ယုံကြည်ချက်၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ရပ်ဖြစ်သည်” ဟု လမ်းညွှန်ထားသည်ဖြစ်၍ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်မှန်လျှင် တိုင်းပြည် အကျိုးဆောင်ရွက်ရန် သာသနာ့တာဝန် တစ်ရပ်ဟု မှတ်ယူကြရမည် ဖြစ်ပေသည်။ ။ ။ ။
ထိုအခမ်းအနားတွင် ဟောပြောသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ အားလုံး အထူးပင်ကောင်းမွန်လှပေသည်။ ထိုအကောင်းဆုံးများထဲမှ ကျွန်ုပ် အနှစ်သက်ဆုံးကိုဖေါ်ပြရမည်ဆိုပါက (အရှင်တိက္ခသာရကထိက သာသနာ့ဒဇဓမ္မာစရိယ(B.A,M.A) (သီတဂူကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်) မှ ဟောကြားသော ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမ တရားထူးဖြစ်သော
“ဂရုဏာနဲ့ ပညာ ၂ပါး ရှိမှ လူသား အားလုံး ငြိမ်းချမ်းမှု ရမယ် ”
“လူအချင်းချင်း လူလို မြင်တတ်တဲ့ ဂရုဏာစိတ် ရှိကြရမယ် ”ဟူသော ဟောပြောချက်သည်လည်းကောင်း၊
သမိုင်းပညာရှင် ဆရာကြီး ဒေါက်တာခင်မောင်ညွှန့် ဟောပြောတဲ့ “ကိုးကွယ်ချင်တဲ့ဘာသာ ကိုးကွယ်ပါစေ – ဘယ်မှာမွေးသလဲ၊ ဘယ်မှာ နေသလဲ ဆိုတာပဲ အရေးကြီးတယ်”ဟူသော ဟောပြောချက် တို့မှာ တကယ့်ကို အနှစ်သာရရှိတဲ့ တန်းဖိုးထား မမေ့အပ်တဲ့ တရားတွေပါလားလို့ ယုံကြည်မှု ဖြစ်ရပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဖွါး မျိုးဆက်သစ် အစ္စလာမ်မောင်မယ်များဟာ ဒီလိုအခမ်းအနားတွေမှာ ပါဝင်ကြားနာပြီး ဆရာကြီးဦးရာဇတ်လို တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက် ဘ၀တွေ ပေးဆပ်ရင်း အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့ရဲ့ ဂုဏ်ကိုမြှင့်တင်ကြရင်း၊ အတားအဆီးများရှိမယ် ဆိုရင်တောင် ထိုအတားအဆီးများကိုဖြတ်ကျော်ရင်း မိမိတတ်စွမ်းသမျှ ခွန်အားဖြင့် တိုင်းပြည်အကျိုး သယ်ပိုးကြပါစို့လို့ ဆန္ဒပြုရင်း . . .
ဆရာကြီး ဦးရာဇတ် ရဲ့ ၁၁၅ ကြိမ်မြောက် အခမ်းအနားကြီးကို ဂုဏ်ပြု မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။
← အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် နိုင်ငံတကာမှ ပူးပေါင်းဖြေရှင်းပေးမည့်အပေါ် သဘောထား ထုတ်ပြန်ချက်
ဆရာကြီး ဦးရာဇတ် (၁၁၅) နှစ်မြောက် အခမ်းအနားမှ ပြန့်လွင့်လာသည့် အသံများ →